ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »6အရေးကြီးအရာကိစ္စတွေအမျိုးသားများလိင်ကာလအတွင်းအကြောင်းစဉ်းစားပါ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: စက်တင်ဘာ. 25 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
ထိုယောက်ျားတွေလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အကြောင်းအဘယ်သို့ထင်ကြဘူး? ဒီဖြစ်ကောင်းအာဒံနှင့်ဧဝတို့၏အချိန်ကတည်းကအမျိုးသမီးကိုအနှောက်အယှက်ပေးလျက်ရှိသည်ကိုတဦးတည်းမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်. ရာစုနှစ်များစွာကသွားကြပြီ, သို့သော်အနည်းငယ်အမျိုးသမီးတွေသူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လိင်ဆက်ဆံသည့်အခါစဉ်းစားသည်အတိအကျဘာကိုသိသောယုံကြည်စိတ်ချစွာပြောနိုင်. အောက်တွင်အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲသို့လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်လူတစ်ဦး၏စိတ်ကိုသိမ်းပိုက်စေခြင်းငှါအချို့အကြံအစည်စူးစမ်း.
ကျွန်မအချိန်မတိုင်မီ ejaculate မမျှော်လင့်
လိင်ဆက်ဆံနေစဉ် performance စိုးရိမ်ပူပန်လိင်ဆက်ဆံသည့်အခါတိုင်းနီးပါးသည်လူကိုတွေ့ကြုံလာခဲ့ရာတစ်ခုခုဖြစ်. အချို့အတွက်ကပုံမှန်ပါပဲ, တခြားသူတွေအတွက်ကြောင့်သာဤကဲ့သို့သောကာလကြာမြင့်ပြီးမှလိင်ဆက်ဆံသည့်အခါကဲ့သို့အချို့တိကျသောအချိန်အခါတွေမှာဖြစ်ပျက်နေစဉ်, အသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဖက်အဆင်ပြေချောမွေ့လာပြီ, စသည်တို့ကို. performance စိုးရိမ်ပူပန်မှုအချိန်မတန်သေးသုတ်ရည်လွှတ်မှု၏သမိုင်းနှင့်အတူလူတို့တွင်အထူးသဖြင့်ဘုံဖြစ်ပါသည်.
ညည်းတွားရမဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်ရပ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်. ယောက်ျားတွေဟာအမြဲတမ်းသူတို့ညည်းတွားရလမ်းကို ပတ်သက်. အလွန်စိတ်ချယုံကြည်ကြသည်မဟုတ်. လိင်ဆက်ဆံသည့်အခါ, သူတို့မကြာခဏသူတို့ရဲ့ကိုလညျးစုံလင်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားတာကိုအဆုံးသတ်. သူတို့တစ်တွေမကောင်းတဲ့ကိုလညျးပယ်သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုဖွင့်အံ့သောငှါထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံသောကြောင့်ဖြစ်သည်. ဒါကြောင့်, သင့်ရဲ့ခင်ပွန်းဒါမှမဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်မတူညီသောအချိန်အခါတွေမှာကွဲပြားခြားနားညည်းတွားလျှင်, ဒါကြောင့်သဘာဝအမဖြစ်လိမ့်မယ်နဲ့သူ့ညည်းတွားပြီးပြည့်စုံစေသည်ကြိုးစားမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်.
ဒီအတွေးယောက်ျားလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်ရှိသည်ကိုလည်းစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုဘေးထွက်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါမေးခွန်းကိုမကြာခဏလူတို့အနှောက်အယှက်မပေးဘူး, လိင်ဆက်ဆံသည့်အခါအမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်ပိုမိုပြောဆိုဖြစ်လေ့; သို့သော်, ချွင်းချက်အစဉ်အမြဲရှိပါတယ်.
ထိုသူတို့သည်မိမိတို့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဘာလုပ်နေသလဲဆိုတာကိုမကြိုက်ဘူးလို့တိတ်ဆိတ်သွားသောသူအမျိုးသမီးများစွာရှိပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ဒါဟာင်. သို့သော်, အမြဲတမ်းအမှုမဖွင်. အချို့တို့သည်ငြိမ်ဝပ်စွာတည်းခိုကြိုက်တတ်တဲ့လို့ငြိမ်ဝပ်စွာနေ.
ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသဘာဝအတိုင်းလာလို့လူတချို့ညစ်ပတ်ပြောဆို, ကိုယ့်အပေါ်သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုဖွင့်ဖို့ကိုကျင့်သောသူသည်အခြားသူများရှိပါတယ်နေစဉ်. သို့သော်, သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်ထိုကဲ့သို့သောစကားတော်ကိုနားထောင်ကြမှ likes မည်မျှနှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏စိတ်ထဲတွင်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုမကြာခဏရှိပါတယ်; ယောက်ျားတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအသစ်၌ရှိကြ၏သည့်အခါဤအများအားဖြင့်ဘာဖြစ်လာ.
ယင်းစကားရပ့်ရင်သားသို့မဟုတ်ဖူးစာ၏စုံလင် pair တစုံဟာမြင်ဘူးသောလူတို့အတွက်ဘုံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သူအများစုကအရေးယူမွေ့လျော်စတင်သည်အခါလူသည်ဒါစဉ်းစားစေခြင်းငှါ,. လူသည်၏စိတ်ကိုစ uttering စတင်နိုင်ပါသည် “Oh, အကောင်းဆုံးပဲ” သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကအတော်လေး sexy လုပ်ရပ်သက်သေခံပြီးနောက်.
အမျိုးသမီးအများစုဟာဒီအံ့သြစရာကောင်းတွေ့လိမ့်မည်, လိင်ဆက်ဆံသောအခါမူကားမကြာခဏယောက်ျားအခြားသောမိန်းမများအကြောင်းစဉ်းစား. လိင်နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်တည်းခိုပြီးနောက် monotonous ဖြစ်လာတဲ့အခါဒီများသောအားဖြင့်ဘာဖြစ်လာ. သင်လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တခြားအမျိုးသမီးမစဉ်းစားဘူးဆိုတာသေချာချင်တယ်ဆိုရင်, သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုတက်မြိန်ဖို့ခြေလှမ်းတွေယူ.
ဤယောက်ျားသည်လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်စဉ်းစားနိုင်ကြောင်းအနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုခဲ့ကြသည်. လိင်ဆက်ဆံသည့်အခါသူ၌ရှိ၏အခြေအနေအပေါ် မူတည်. တစ်ဦးသည်လူ၏စိတ်စိတ်ပျက်ဖွယ်ပိုပြီးလိုက်တယ်အကြံအစည်ရှိနိုင်ပါသည်.
3 သင့်အနေဖြင့်ပြီးပြည့်စုံငယ်များကိုသံလိုက် Make မှသိကောင်းစရာများ!
ဒါဟာမစ္စတာပတ်သက်လာလျှင်ချစ်စနိုးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ Sense အနီရောင်အလံနိုင်သလား. မှန်သော?
သင်နဲ့သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ရဲ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များ Manage ကိုကူညီပါခြောက်စည်းမျဉ်းများ